Prof. Geeddi oo ka carooday magacaabidda maamulka Balcad uu magacaabay ku xigeenka wasiirka gaashaan dhigga, shirka Sanca Form oo 27ka bishan ka bilaabanaya Addis Ababa iyo dadka ku geeriyooday madaafiic ay ciidamada Itoobiya xalay fiidkii ku ridday xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen sida la sheegay dad ka badan 10 ruux. Ruunkinet 24/02/07
Dad ku dhow dhow ra'isul wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in uu ka carooday magacaabidda uu dhawaan magacaabay maamulka degmada Balcad ku xigeenka wasiirka gaashaan dhigga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Salaad Cali Jeelle ayaa la sheegay in uu magacaabay maamulka degmada Balcad intii uu ra'isul wasaaraha ku maqnaa shirkii ka dhacayay dalka Fransiiska.
Dhanka kale, kulanka Sanca Form ayaa la sheegay in uu ka dhacayo magaalada Addis Abbaba 27ka bishan.
Kulankan ayaa waxaa isugu immaanaya mas'uuliyiinta ugu sareysay dowladaha Suudaan,. Itoobiya, Yeman iyo Soomaaliya.
Warar aan la xaqiijin ayaa ku waramaya in ra'isul wasaare Geeddi uu ka qeyb galayo shirkaasi in kastoo ay qaar kalane sheegayaa in madaxweyne Cabdullahi Yuusuf aadi doono kulankaasi.
Dhinaca kale, Madaafiic ay xalay fiidkii ciidamada Itoobiya ay ku tuureen xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dad ka badan 10 ruux oo u badan caruur iyo haween guyahooda joogay.
Arrintan ayaa ka dambeysay kagadaal markii maleeshiya hubeysan ay weerar gaadma ah ku qaadeen ciidamada Itoobiya oo saldhig ka dhigtay xarunta wasaaradda gaashaan dhigga ee magaalada Muqdisho.
Dagaal la isug adeegsaday hub culus iyo mid fudud oo dhex maray maleeshada weerartay ciidamada Itoobiya lana sheegay in uu socday muddo dhan 45 daqiiqo ayaan la ogeyn dhibaatada gaartay ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyadii weerartay.
Weerarada ciidamda Itoobiya lagu hayo in muddo ah ayaa maalmahii la soo dhaafay sii kordheysay kadib markii maleeshiya sheegatay in ay yihiin Muqaawimo ay goosteen in ay ciidamada Itoobiya xoog uga saaraan Xamar iyo guud ahaan Soomaaliya in kastoo ay ciidamada Itoobiya si aan naxariis lahayn madaafiic ugu garaacdo dadka rayid ah ee ku nool magaalada Muqdisho.